Home Wararka Villa Somalia oo isku maandhaafsan qofkii bedeli lahaa Farmaajo (Kheyre ama...
[XOG] Villa Somalia oo isku maandhaafsan qofkii bedeli lahaa Farmaajo (Kheyre ama Qoor Qoor)
Waxaa indhaweydba socday kullamo aay lahaayeen kooxda ololaha Doorashada Farmaajo oo uu hormuud ka yahay Sheekh Bashiir Salaad oo ah madaxa ololah Doorashada Madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Wadahadalada ayaa diiradda lagu saaray caqabadaha hortaagan dib u doorashada Farmaajo, waxaana kooxda aay isla garteen in uu caqabad ku noqday RW Maxamed Xuseen Rooble, taasoo keentay in aay wadatashi iyo istraatijiyo cusub kooxda la timaado.
Sida MOL aay u sheegeen ilo wareedyo xog ogaal u ah kooxdan, waxaa maalmahii la soo dhaafay laga tashanayay qofkii kooxda u noqon lahaa musharax kaddib markii dagaalka lagula jiro Farmaajo uu noqday mid aan waxba laga qaban karin.
Sheekh Bashiir Salaad ayaa wada feker ah in kooxda aay taageeraan musharaxna uu noqdo Axmed Cabdi Kaariye Qoor Qoor, halka Fahad Yasin uu rabo in fursadda la siiyo Xasan Cali Kheyre.
Hoggaanka Koofur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen ayaa isna qaba in labada shaqsi aanay ahayn kuwa ka gadmaya ummadda isla markaana lagu aanini karo masiirka ummadda Soomaaliyeed. Xasan Cali Kheyre ayaa maalmihii la soo dhaafay si gooni ah shirar ula lahaa Xasan Cali Kheyre isagoo isku dayaya in uu ku qanciyo in uu taageero.
Waxaa sidoo kale Villa Soomaaliya uga socda kulamo dhaadheer Farmaajo, Qoor Qoor iyo Laftagareen taasoo looga arrinsanayo sidii laga yeeli lahaa Doorashada kursiga Madaxweynaha oo u eg mid faraha kasii baxeyso.
Farmaajo ayaa isaga aaminsan in Xasan Cali Kheyre uu noqdo kooxda Plan B. Halka lagu wado in Laftagareen uu isku sharaxo kursiga Guddoomiyaha Baarlabaanka.
Waxaa kooxda N&N ku dhacay jahwareer kaddib markii aay iska hor yimaadeen RW Rooble kaasoo rajada kooxda N&N ka dhigay mid quus ah.
Previous articleMaxaa looga hadlay shirka golaha wasiirada Jubbaland?.
Next article[Akhriso] Qodobada ka soo baxay safarkii RW Rooble ee Imaaraadka
(Cod qarsoodi ah) Mahad Cawad oo aflagaadeeyay shacabka iyo dowlada Puntland
Farmajo oo qabsaday Jidkii Kalitalisnimo iyo Fasahaad Diineed, Daleed Iyo...